Stainless Simbi Reactor Heating Induction-Stainless Container Heater
musha / Applications / Induction Kuchenesa Reactor / Stainless Simbi Reactor Heating Induction
Category: Induction Kuchenesa Reactor Tags: 304 Stainless simbi reactor kudziyisa, 310 isina tsvina yemudziyo hita induction, 310 Stainless simbi mugaba kudziyisa, 310 Stainless simbi reactor kudziyisa, 316 Stainless reaction heater, 316 simbi isina tsvina reactor heater induction, tenga Stainless reaction heater, induction reactor hita, reactor kudziyisa, Stainless simbi mudziyo kudziyisa, Stainless simbi reactor hita, Stainless simbi reactor kudziyisa
Induction Heating 304 #, 310 #, 316 # Stainless simbi reaction kettle, Stainless mudziyo
Induction kupisa makemikari reactors yeReactors neKettles, Autoclaves, Maitiro Ekushongedza, Kuchengeta uye Kugadzika Matangi, Mabhati, maVheti uye Zvichiri Hari, Midziyo yekumanikidza, Vapourisors uye superheater, Heat Exchangers, Rotary Drum, Pipes, Dual Fuel Heated Midziyo uye makemikari midziyo ndiyo yakanyanya yepamusoro kupisa nzira inowanikwa chero inoyerera kugadzira.
Nzira dzekudziya dzechinyakare dzemhando dzakasiyana-siyana dzemareactor dzinonyanya kushandisa waya yekupikisa, gasi, mafuta emafuta, biofuel kana kumwe kupisa kusina kunanga. Dzinenge dzese nzira dzekudziya dzinoshandisa musimboti wekusiyanisa tembiricha kuti uwane kutamisa kupisa. Kune rimwe divi, iyi yechinyakare yekudziya maitiro Kupisa kwesimba kuchaparara panguva yekufambisa, uye kune rimwe divi, kugona kwekugadzira kwemidziyo kuchaderedzwa nekuti saizi yemusiyano wekushisa ichakanganisa kumhanya kwekupisa.
The remagetsi induction hita inoshandisa iyo reaction kettle semutakuri, uye inotsiva iyo yechinyakare yekuchinjisa kudziyisa nemagetsi emagetsi dhiraivha kupisa, uye inokonzeresa zvakananga kupisa kune inopindurwa kettle muviri, kuti kupisa kumhanyisa kunogona kuvandudzwa. Panguva imwecheteyo, coil inogona kurongwa pamadziro ekunze o
f iyo kettle yekuita, uye mudziyo wekudziya hauzokuvadzwa nekuda kwekupisa kwakanyanya muketani yekupindura. Panguva imwecheteyo, hapana kuburitswa kunokonzerwa nekudziya kwemaitiro panguva yekudziya, iyo inogadzirisa dambudziko rekushomeka kwekugadzirwa kwemaitiro echinyakare ekudziya emidziyo uye kuchengetedza kwekudziya zvinhu. Kazhinji matambudziko uye kusvibiswa kwezvakatipoteredza kunokonzerwa nekupisa.
Mabhenefiti eInduction Heating
Induction heat inodarika 98% inoshanda pakushandura magetsi kuita kupisa, ichipa simba rekuchengetedza 30% uye zvimwe.
Yakachengeteka uye yakavimbika
Yakabatanidzwa nehungwaru kutonga, iyo induction yekudziya inobvisa kudiwa kwemoto wakavhurika uye kupisa masvikiro, kuve nechokwadi chekushanda kwakachengeteka.
Pasina kudikanwa kwemoto wakavhurika, induction heat haiburitse guruva, kunhuwa, ruzha uye magasi ane njodzi, zvinoenderana nezvinodiwa neNational Energy Conservation Policy.
Digital control system inova nechokwadi chekudzora tembiricha, ichipa hungwaru kushanda.
Compact structure, nyore kugadzirisa
Tine induction kupisa muchina kubva 1 KW ~ 500KW. Iyo tembiricha yekudziya 0～650 C. Tinogona kugadzira yakakodzera induction kupisa muchina wemhando dzakasiyana reactor.
Muenzaniso: Atmospheric Pressure Reactor
Kukora kwemadziro: 8mm
Reactor uremu: 1000kg (approx.)
Mvura inorema uremu: 7t
Chaicho kupisa simba remvura zvinhu: 4200J/kg*ºC
Zvinodiwa: kupisa kubva 20ºC kusvika 280ºC mukati maawa matatu
Formula yekuverenga kupisa: Q=cm▲t+km
Simba rekuverenga fomula: chaiyo kupisa huwandu J/(kg*ºC)×tembiricha musiyanoºC×uremu KG ÷ nguva S = simba W
Iyo theoretical simba ndeye 708kW, asi simba chairo rinowanzowedzerwa ne20% nekuda kwekutora kurasikirwa kwekupisa mukufunga, ndiko kuti, simba chairo 708kW * 1.2≈850kW. Maseti manomwe e120kW induction heat system semusanganiswa anodiwa.